Gini bu shei? | Site na Linux
Gini bu shei?
jorgemanjarrezlerma | | Ọdịdị / Nhazi
A awa ole na ole gara aga m gwa banyere GNOME Shell na ọdịnihu ya ma onye na-agụ ihe zoro aka n'ihe m weere dị ka ihe dị mkpa ịtụle, Gịnị bụ shei?.
Ọma site na nkọwa anyị nwere: Na Mgbakọ, okwu ahụ shei A na-eji ya na-ezo aka na mmemme ndị ahụ na-enye interface njirimara iji nweta ọrụ sistemụ arụmọrụ. Ndị a nwere ike ịbụ eserese ma ọ bụ ederede ederede, dabere na ụdị interface ha na-eji. A na-emepụta Shell iji kwado ụzọ a na-akpọ ma ọ bụ gbuo ihe omume dị iche iche dị na kọmputa..
Ekwesiri ighota na enwere udi Shell abuo ma ndia bu:
Shells ederede nkịtị dị ka bash, emacs, iwu Windows nyere n’etiti ndi ozo.
Mkpụrụ osisi eserese dị ka GNome, KDE, XFCE, LXDE, Unity, MacOS Desktop Environment, Windows Desktop na ndị ọzọ.
Ya mere, anyị nwere ike ichikota na Shell dị na mkpụrụ okwu ole na ole desktọọpụ (DE) ma ọ bụ Windows Manager (WM) nke anyị ji arụ ọrụ na PC anyị, n'agbanyeghị nkesa anyị na-eji ma site na GUI (gburugburu eserese) ma ọ bụ site na ọnụ gbasara mmekọrịta anyị chọrọ ka anyị nwee ike iji ọrụ na ngwa nke sistemụ arụmọrụ na-enye.
Enwere ike ịkọwa otu nkọwa a na ekwentị mkpanaaka dịka smartphones na mbadamba, ma ọ bụ iji gam akporo, iOS ma ọ bụ Windows Phone; ebe ọ bụ na ndị nke a na-arụ ọrụ na sistemụ arụmọrụ nwere DE ma ọ bụ WM nwere nhazi.
Yabụ, KDE bụ Shell, XFCE bụ Shell, LXDE bụ Shell, iOS bụ Shell, Android bụ Shell, Windows Phone bụ Shell, ngwụcha ya bụ shei (site na bash), yabụ kedu ihe anyị ga - ekwu gbasara GNOME 3 bụ banyere ya interface na ọdịdị ihe ọ bụla ọzọ. Na mgbanwe ahụ dị oke mkpa: EE.
KDE na / ma ọ bụ ndị otu ime obodo na-anwale gburugburu ebe nwere ihe ọmụma "yiri" (ịghara ịsị otu ihe ahụ) dị ka nke ọrụ Gnome si arụ ọrụ taa, ebe ọ bụ na nkọwapụta KDE nwekwara ike ịkpọ KDE Shell.
Maka ihe niile akọwapụtara na paragraf ndị gara aga, enwere m ike ịsị na GNOME 3 (Shell) nwere ọdịnihu ma ụfọdụ mmadụ nwere mmasị na ya ma ndị ọzọ anaghị amasị ya.
MARA: definitiondị nkọwa na ụdị shei m si na Wikipedia, njikọ ya bụ nke a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Gini bu shei?
Ọfọn, ọ bụrụ na nke ahụ bụ nkọwa nke shea, mgbe ahụ shells nwere ọdịnihu.
Ma ebe desktọọpụ nke Gnome (GNome-shell ghọtara) enweghị ya ọ gwụla ma ọ na-eme ka a hazie ya dịka m kwuru na post ọzọ.
Achọrọ m imesi ike na anaghị m emegide shells, naanị gnome3 ahụ, nke m ma ọ bụ dịka mkpa m si dị abaghị uru.
Odi nma !! Ọ dị ugbu a karịa ma ọ bụ na-erughị ... M ghọtara na Desktọpụ Gburugburu (DE) na Window Managers (WM) tinye ọkwa shei ...
Ntinye na nkọwa ahụ dị m mma. Echere m na amaara m ihe Shell, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ na-abịa izu ike na echiche na ịmara na echefula na m na-anwa ịga n'ihu ịbụ shei (akara iwu). Ọ bụ otu interface ọzọ nke ederede. Echere m maka onye njikwa desktọọpụ dị ka mkpokọta WM + Shell + ngwaọrụ ndị ọzọ. Na akụkụ ọ bụ ihe ijuanya ma ọ bụ ihe ọghọm itinye nsonye a n'ihi na m na-eche ugbu a etu m ga - esi wụnye Arch (obere ntinye), na - enweghị wụnye Gnome Shell, iji wụnye Cinnamon (nke m ghọtara bụ Shell ọzọ). Amaghị m ma m nwere ike ime ya site na iji ụfọdụ parameters na pacman (–ignore ma ọ bụ ihe dị ka nke ahụ). Ọ ga-amasị m ịwụnye LightDM-Ubuntu kama GDM ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ịwụnye Nautilus iji nwaa ọzọ dị ka Nemo, Pantheon, wdg. A bit dị ka Cinnarch na-eme ma na-eme ya onwe m. Mana ọ bụ okwu dị mfe n'ihi na ekwubuola m na m na-eche n'echeghị echiche maka otu esi etinye Gnome Shell n'ọnọdụ ọzọ wee si otú a wụnye ihe ndị dị mkpa.
Ekele na ekele maka isiokwu;).
Ọ dịghị mkpa ichepụta nkọwa. A na - akpọ "shea" gọọmentị maka KDE SC 4 Plasma ma ọ nwere obere ihe jikọrọ ya na GNOME Shell (ekele). A na - akpọ "shea" gọọmentị maka GNOME 3 GNOME Shell n'ihi na ndị mmepe ya chọrọ ya n'ụzọ ahụ. Na ịtụle KDE dị ka gburugburu (ọ bụghị dị ka obodo ọ bụ) enwere ike ịnabata na mkparịta ụka na-enweghị isi mana ọ bụ mmejọ (Wikipedia nwere ike ịsị oke) n'ihi na ndị zụlitere KDE SC 4 anabatabeghị na mfe ahụ ogologo oge. Na GNOME ha nwere iwu ọzọ, ma obodo ma gburugburu ebe a na-akpọ otu.
Ugbu a ka m chere banyere ya, ị bụ eziokwu, ekwenyeghịkwa m na lxde bụ shei, ọ bụ naanị okpokoro desktọọpụ dị ka XFCE na ndị ọzọ, mana dịka m kwuru shei ọjọọ ahụ bụ gnome nke ndị ọzọ enweghị mkpesa, ndị nwere ike Plasma mkpesa (Ọ gwụla ma ị wụnye ya na kọmputa na 256 ebule).
Kpọmkwem. Echere m na enwere ihe na-atọ ụtọ n'ihe ị na-enye: KDE (na-ekwu okwu n'echeghị echiche) abụghị Shell, kama ọ bụ Desktop Environment, na Plasma bụ KDE Shell. Ma eleghị anya, m na-ezighi ezi, mana echiche nke Shell na DE enweghị ihe jikọrọ ya na ya.
Anaghị m ewere ha otu ihe ahụ. Maka m otu ihe bụ desktọọpụ (eserese eserese nke na-esote ihe atụ desktọọpụ) na ihe ọzọ bụ gburugburu desktọọpụ (ebe desktọọpụ na ihe ndị ọzọ gụnyere). Nke a nwere ike ịdị mgbagwoju anya mana enwere ike iji ihe atụ wee jikọta ya. GNOME 3 bụ ebe desktọọpụ na GNOME Shell, Unity, wdg bụ desktọọpụ (GUI ma ọ bụ ihe osise "shells").
Kpọmkwem, Desktọpụ bụ ebe anyị nwere akwụkwọ ahụaja, ogwe, akara ngosi ahịhịa na ihe ndị ọzọ. Desktop Environment niile bụ ngwaọrụ na ọcha ndị na-arụ ọrụ na Desktọpụ na Shell bụ ihe ịchọ mma anyị na-etinye na desktọọpụ ma ọ bụ desktọọpụ ọhụrụ 😀
Ọ bụrụ na ị kwenyesiri ike na ị bụ eziokwu, ikekwe ị ga-ewepụ Wiquipedia nke njehie ya ...
Ọ bụ isi mmalite e lere anya dị ka nke a pụrụ ịdabere na ya mana ọ bụghị nke na-enweghị ntụkwasị obi, n'okwu a, ọ dị ka ọ dị njọ, ma ọ bụ na ọ bụghị?
@ José Miguel, Wikipedia na-achịkwa ụfọdụ ndị na-enweghị mkpụrụ obi ndị mmadụ na-akpọ ndị ọbá akwụkwọ. Ihe eji egwuri egwu ha ekwesighi imetu aka (belụsọ na ichoro ịbụ otu n’ime ha).
Wikipedia na-emegiderịta onwe ya n'ọtụtụ peeji ya. Naanị ị ga-ahụ ihe ha dere banyere ịdị n'otu na njikọ ndị a:
O doro anya na isdị n'otu bụ desktọọpụ desktọọpụ wuru maka ebe desktọọpụ GNOME. Ọ dị ka matrioska.
ọ bụ ya mere nke "KDE SC"
Jorge Manjarrez na-bụ mmadu dijo
Naanị, m mere post a site na ịkọwa okwu nke yiri ka ọ dabara adaba. Ha niile dị mma n'okwu ha na nkọwa ha dịka KDE bụ DE na Plasma shei, ana m eche na gnome na-eme ka ọnọdụ 2 a dịrị naanị na 1. Ọ bụrụ na echiche ahụ dị mma ma ọ dị njọ, amaghị m, ọ bụrụ na ọ nwere ọdịnihu, oge ga-agwa.
Ekwenyere m na gnome ji nwayọọ nwayọọ na-enye ọdịdị na ihe a "ọhụrụ" DE + Shell na mgbanwe na ndozi e mere na idegharị 6 na ọdịnihu idegharị 8 gụnyere ngwaọrụ ndị ọzọ na-enye ohere a obere ihe mfe (karịsịa maka GUIsers) ),, ebe ọ bụ na site na njedebe na ime mgbanwe na CSS ị nwere ike ịnweta gburugburu ebe obibi na-arụ ọrụ nke ọma na tebụl na-arụ ọrụ bara uru karị.
Zaghachi Jorge Manjarrez
Enwere m ajụjụ gbasara ịdị n'otu bụ mkpụmkpụ 3 shem nke emere na Qt? Banyere KDE, Aghọtara m ihe Windóusico kwupụtara «A na-akpọ mkpokọta KDE SC 4 Plasma»
PS: ma jide gnome shei !!!
Zaghachi iji rolo
[quote = piayet] [quote = piayet] Onye nwere ike ịgwa m ihe dị iche na Gnome 3 na Gnome Shell? [/ see okwu]
haha capo, daalụ maka azịza ...
Nke m bu soso na windo hehehee xd
Achọrọ m ka mmadụ nyere m aka itinye otu programmụ na-agba n’okpuru windo na FEDORA 17
Agbalịrị m na TERMINAL mana ọ na-agwa m na enwere faịlụ arụnyere nke chọrọ ụdị ọzọ.
N'oge a anaghị m echeta ya mana ọ bụ ihe dịka nhazi na mbipute 2.8.0.6 na nke arụnyere bụ 2.8.0.8 agara m na web nke faịlụ a ma ọ bụ ndị ọkwọ ụgbọala na ebe ahụ ọ dị ka onye na-ajụ m na njedebe mgbe ọ na-enye m njehie ma mgbe ị chọrọ iji wụnye ya na-agwa m na emelitere mbipute arụnyere.
Echiche m nwere bụ iwepụ nsụgharị ọhụrụ wee wụnye ụdị nke ochie. naanị na na Linux amaghi m ihe iwu a ga - ewepu ya.
Ma ọ bụ ọ bụrụ na enwere mmemme ndị ọzọ na-abụghị mmanya na ịba uru iji wụnye. yabụ nwaa onye ọzọ ma eleghị anya gbaa ọsọ ...
Ihe ozo bu na enwere m onye ozi etinyere ma nke etinyere na jiko ozi hotmail. Echere m na akaụntụ hotmail m na yahoo zigara njehie.
N'ikpeazụ, olee ebe m ga-ahụ ọkpụkpọ nke nwere ezigbo ụda dị ka windo media player 11 na nsụgharị 12.
ihe fedora 17 enweghi ezigbo olu. ọ bụ ụda sorrund ahụ
mfcollf77 kedu ihe mere na ị naghị ajụ ajụjụ a na nnọkọ na nke a abụghị ya?
Anaghị m ata ndị ọhụrụ ụta, abụrụla m onye ọrụ GNU / Linux ọtụtụ afọ ihe ndị a ka na-agbagwoju m anya 🙂
Mana ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na onye dere akwụkwọ ahụ emechaa nyocha ma mezie ihe ndị ahụ na-ezighi ezi. Ikekwe echiche zuru oke nke ihe eserese eserese na-arụ ọrụ nwere ike ịbụ ihe ziri ezi, mana ọ bụghị iji okwu Shell na GNU / Linux.
@elav enweela ihe ịga nke ọma n'echiche ya. N'otu aka ahụ, na Wikipedia (ma n'asụsụ Spanish ma na Bekee) enwere ezigbo ozi.
* Desktọpụ Gburugburu: KDE, GNOME, Xfce, LXDE, wdg
* Window Manager: KWin, Metacity, Mutter, Enlightenment, Xfwm, wdg
* Ihe eserese eserese eserese (User Iinterface): Na KDE ha na-akpọ ha Workspace ma nwekwaa atọ: Plasma Desktop (Desktops), Plasma Netbook na Plasma Active (ngwaọrụ mkpanaka). Nke ikpeazu abughi ebe a na-aru oru ma obu ihe omuma ndi ozo.
Na GENOME anyị nwere GNOME Shell nke bụ onye ọrụ nke ọrụ ahụ na Unity maka Ubuntu.
Site na ihe m gụworo n'elu, ha dị ka ihe ziri ezi. Wikipedia na Spanish yiri ka enweghị ntụkwasị obi karịa nke dị na Bekee.
Ihe kachasị atụkwasị obi bụ ịkpọtụrụ peeji gọọmentị nke ọrụ ọ bụla. Wayzọ a ị na - ezere cacaos nke uche.
Iji mara mma karịa, onye ọ bụla n'ime anyị nwere ike idezi ma mezie ndenye Wikipedia. Mana m kwenyesiri ike na ime nke ahụ ka ọ dị mma ka ọ dabara adaba n'isiokwu nwere nkwenye kachasị nke ihe edere. Echere m na nke ahụ bụ ihe na-eme na Wikipedia na Spanish, na ebumnuche nke imekọ ihe ọnụ na-agbakwunye ndenye ọ bụrụgodị na ha emebeghị nyocha zuru ezu na isiokwu ahụ.
M na-arịọ onye na-ede blọgụ ọzọ iji dokwuo anya echiche, n'ihi na naanị iche na site na ntinye dị ka nke a, ha nwere ike ịsị na KDE bụ Shell, ọ na-enye m ọgazị bumps
Ezi nkọwa, daalụ.
Zaghachi ka oburu
Ikekwe enwere m ihe na-ezighi ezi, mana echere m na ihe ị na-egosi ezighi ezi, ebe ọ bụrụ na anyị etinye nkọwa nke gị, Gnome-Shell * ma ọ bụrụ na * bụ shei, dị ka KWin, mana ọ nweghị mgbe ọ bụla Gnome na / ma ọ bụ KDE (Anaghị m ekwu okwu na desktọọpụ ndị ọzọ dịka m amaghị ha nke ọma dịka abụọ ndị a)
N'aka nke ọzọ, enwere ike gbanwee ya na nkọwa gị karịa Window-Manager ọ bụla (AfterStep, Enlightenment, FluxBox, WindowMaker, Fvwm, wdg). Mana ọbụlagodi na ha agaghị adị ọtụtụ, ebe ọ bụ na ị na-emekọrịta ihe na sistemụ ahụ, enwere usoro X, yana Window Window ga-abụ shei iji mekọrịta na usoro eserese X (ihe nwekwara, n'ụzọ ụfọdụ, ọ ga-adabara na desktọọpụ ndị ọzọ).
Ma dị ka m kwuru, ma eleghị anya, m bụ onye ọjọọ ...
Zaghachi Manuel Trujillo
briseida ilas lopez jimenez dijo
Shell anaghị amasị m
Zaghachi ka briseida iras lopez jimenez
Ubuntu / Kubuntu na nkwekọrịta na-etinye CD nha
Ọ bụ ọrụ gọọmentị, Ubuntu na Kubuntu agaghịzi adị na CD